Muxuu wasiirkii hore ee Gaashaandhigga C/rashiid ka yiri arrinta amniga iyo ciidamada? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Muxuu wasiirkii hore ee Gaashaandhigga C/rashiid ka yiri arrinta amniga iyo ciidamada?
Muxuu wasiirkii hore ee Gaashaandhigga C/rashiid ka yiri arrinta amniga iyo ciidamada?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlay xaaladda cakira ee dalka, gaar ahaan dooda ka dhalatay arrinta amniga iyo sidoo kale ku milanka ciidanka ee arimaha siyaasada.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ayaa intaasi ku sii daray in kaliya ra’iisul wasaaraha lagu wareejiyey qeyb ka mid ah amniga, siiba kan doorashada, isla-markaana laga heesto amniga qaranka, ayada oo laga leeyahay dano gaar ah, sida uu hadalka u dhigay.
“Haddii amnigii guudba la siyaasadeynayo ciidamadii iyo wixii dhan ra’iisul wasaaruhu awood u laheyn qayb ka mid ah amniga qaranka oo amniga doorashooyinka kaliya haddii loo igmaday amnigii kale ayaa gacanta looga heestaa dano kalaana laga leeyahay waxa looga reebtay taas ayaa keeneysa in ra’iisul wasaaraha uu codsado ama uu soo jeediyo in amniga guud lagu soo wareejiyo ,” ayuu yiri Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed.
“Ciidamo gaar ah oo Gorgor, Duufaan iyo Haramcad loo bixiyey oo dano siyaasadeed laga leeyahay ayaa laga barbar sameeyey ciidanka Xoogga dalka ama afartii waaxood ee ciidanka qalabka sida ee dalka, taas waxa ay keentay in siyaasadda ay ku kuilmaan ciidamada,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirkii hore ee wasaaradda Gaadhaandhigga.
Maalmihii u dambeeyey Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u xusul duubayey inuu la wareego mas’uuliyadda ammaanka guud ee dalka, balse waxaa ka hor taagan madaxda dowlad goboleedyada taabacsan Farmaajo, waxayna hadda doodaasi saaran tahay miiska shirka golaha wadatashiga qaranka, inkastoo la dhaqaaji waayey.
Dooda Rooble ee ah inuu Farmaajo laga wareejiyo masuuliyadda ammaanka guud ee dalka ayaa hadda u muuqata mid sii dhimaneysa, waxaana aad looga dooday shalay, ayada oo maanta la isku deyey in xal laga gaaro cabashadii ka soo laabatay kuraasta dooran ee golaha shacabka, balse ilaa hadda wax la isku fahmay lama shaacin.
Sawirro: Fahad Yaasiin oo loo doortay Golaha Shacabka
Beledweyne (Caasimada Online) – Mgaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka socota doorashada lix kursi oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka...
Golaha Ammaanka oo war culus kasoo saaray Somalia
Rooble iyo Fahad yaa macaash ku qaba khilaafka cusub ee guddiga...
Xog: Sababta ay taliyaasha xildhibaanada noqday u diideen inay dhaartaan
XANUUNKA DILAAGA AH EE AAMUSAN IYO CALAAMADIHIISA?
Deg Deg MD Xasan Sheekh oo Digniin adag Siiyay Saraakiishii Farmaajo...
Daawo: Guddiga dhismaha guriga madaxweyne Farmaajo oo war cusub soo saaray
Martial ayaa go’ankii ugu danbeeyay ka gaaray inuu u wareego Sevilla
R/W Rooble oo la kulmay Maxamed bin Zayed iyo Imaaraadka oo...